ukuvala indawo yokuhlala: UMartin Vrijland
I-Tag: ukuvala indawo
Idemokhrasi ethe ngqo sisisombululo esisiso sokurhwaxwa nguRhulumente wase-Datshi ilizwe lethu. Luhlobo lwentando yesininzi apho abantu bonyula ngokuthe ngqo abameli babo kwi-Intanethi (ekhuselekileyo) yokuvota. Abantu abanolwakhiwo ngokutsha kunye neempawu zobunkokeli bavotelwa. Umntu oneevoti ezininzi uphumelela isikhundla sobuphathiswa. Okufanayo kuya […]
Unokutsalwa kwi-whirlpool yezezimali, njengoko yakhuthazwayo nguRobert Jensen kuthengiso lwayo lokugqibela, kodwa kwenzeka ntoni kwimali yakho? Nam ndaye ndacelwa ukuba ndixhaswe ngumsunguli weBond ngokuchasene neMicimbi kaRhulumente, uJordy Zwarts (jonga ifoto), kodwa ngesenzo esifanayo ngokuchasene ne-5G unangoku […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	1 Meyi 2020	• 19 Comments
Ndifuna ukukulumkisa. Ndingathanda ukukulumkisa malunga nomgaqo-nkqubo wokhuseleko. Ndihlala ndibuzwa ukuba kutheni ndingasebenzi nje noRobert Jensen. Kungenxa yoko le nto kwabonakala kubalulekile kum ukunikela inqaku kule nto. Ndingathanda ukuba uqonde, kodwa ndicela ubuze […]
Umnyhadala w #openup: Siza kuguqula inkqubo yegama ukusuka 'ukuvalwa' ukuya 'ukuvula'
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	29 Aprili 2020	• 1 Comment
Unokuvuma ngentliziyo yonke ukuvala umlomo kwaye ufumane ukuba ucinga ntoni ngayo, kuba ukholelwa ekubeni i-coronavirus iyingozi kakhulu kwaye iyabulala abantu, kodwa nabani na oqonda iNouro Linguistic Programming (NLP) uyazi ukuba amagama abeka amandla qhubeka. Igama 'ukutshixa' linokuphindwe kabini: 'tshixa' […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	27 Aprili 2020	• 16 Comments
Ubusazi ukuba ngeli xesha lokuvalwa kwecoronavirus imeko yongxamiseko sineedolophu ezibi ezingamashumi amabini anesihlanu ezingasalawulwa libhunga ledolophu? Ke banoluhlobo lwamandla ombuso wokucinezela ngaphezulu kwemimandla ebizwa ngokuba yokhuseleko. Igumbi lesibini kuphela elijongileyo, kodwa alinantsingiselo ingako ngexesha lolawulo olungxamisekileyo. Lo mthetho kamasipala uxela ngokucacileyo ukuba […]
Ubhubhani weCoronavirus uxele kwangaphambili kumsitho wokuvula weeOlimpiki zango-2012
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	20 Aprili 2020	• 9 Comments
Umsitho wokuvula ka-2012 ubonise kanye le nto sihlangabezana nayo kuqhambuko lobhubhani lwe-coronavirus. Nokuba isangqa eluhlaza okwesibhakabhaka esiphelweni somthendeleko sinokwakheka ngokuthe ngqo koko sikubonayo kumajelo eendaba njengentsholongwane ye-corona. Bukela ividiyo engezantsi kwaye uzifumanele ngokwakho. Zingaphi ezinye iimpawu onazo […]
Utyelelo lulonke: 2.521.003